Saika nosamborin’ny olona ny Dren Toliara : mpianatra 77 naiditra hopitaly voapoizin’ny odinkankana | NewsMada
Saika nosamborin’ny olona ny Dren Toliara : mpianatra 77 naiditra hopitaly voapoizin’ny odinkankana
Narary kibo mafy, nandoa sy nivalana. Nisy aza safotra tsy nahatsiaro tena mihitsy. Izany no nanjo ireo ankizy 77, mpianatry ny Epp Andaboly sy Anketa, Toliara I, omaly, taorian’ny nihinanan’izy ireo ody kankana nozarain’ny ministeran’ny Fahasalamana, ny alatsinainy teo. Tezitra noho izany ireo ray aman-drenin’ny mpianatra, ary efa saika hisambotra ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena (Dren) mihitsy.
Tsy maintsy nampidirina hopitaly haingana ireo mpianatra 77 avy amin’ny EPP Anketa sy Andaboly, kilasy T3 hatramin’ny T5 rehefa avy nihinana ilay odinkankana nozarain’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny alatsinainy teo. Voatery notazonina tany amin’ny hopitaly ny 37 ary nalefa nody ny ambiny rehefa nahazo fitsaboana.
Nandoa sy nivalana, fanina ary safotra mihitsy aza ireo mpianatra sasany nihinana izany ody kankana izany. Atahorana ny fahasalaman’ny sasany satria tena reraka vokatry ny fahaverezan-drano ateraky ny fandoavana matetika sy ny fivalanana.
Tsy nanaiky mora foana ny fahorian-janany sy ny mety hahafoizana ny sombiniainy ireo ray aman-dreny manan-janaka voapoizin’ny ody kankan’ny minisitera any Toliara ireo. Nikasa haka an-keriny ary hampihatra ny hatezerany tamin’ireo mpampianatra nanome ilay ody kankana ireo ray aman-drenin’ireo mpianatra. Ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena (Dren) aza efa saika nosamborin’ny olona mihitsy.
Nangataka fanazavana tamin’ny Cisco tany an-toerana ihany koa ny ray aman-dreny, saingy tsy nisy fanazavana nomen’ity tompon’andraikitry ny fampianarana ity. Tonga hatrany amin’ny fikasana hisambotra ny ny Dren izany noho ny ahiahy fa tsy afa-bela amin’izao izany tompon’andraikitra izany. Tsy niaiky ny hadisoany kosa ny tompon’andraikitry ny fahasalamana any amin’ny faritra atsimo andrefana, fa milaza ny mbola hanao fanadihadiana amin’ny minisitera aty an-dRenivohitra.
Mbola nohazavainy fa “effet secondaire” an’ilay ody kankana ny nahatonga izany.
Tsy nahafaly ny ray aman-dreny ny fanazavana nentin’ny talem-paritry ny fahasalamana, Andriamiarisoa Francis ka nahatonga korontana tao an-Tanànan’i Toliara.
Nambenan’ny mpiatandro filaminana ny hopitaly
Tsy niandry ela koa anefa fa niatrana avy hatrany ny mpitandro filaminana ka nahitana azy ireo ny teny amin’ny hopitaly misy ireo mpianatra tsaboina, mba tsy hisian’ny savorovoro. Efa tonitony ny toe-draharaha ny hariva. Voalaza koa fa efa tsy misy ahiana ny ain’ireo mpianatra. Nitondra fanazavana ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa 77 ireo ankizy tsy nahazaka ity odin-kankana ity. Efa natsahatra ny fizarana izany.
Tatiana A. sy CMS